Tower Iftiinka Daadka, Laydhka Led Stack Lights, Tend Tower Light - Ka Iftiimaya
Qalab Soodejinaya Semi-otomaatig ah
Isha iftiinka isku dhafan
Dadaal heer sare ah ma leh nasasho
Hal qayb oo ka mid ah Fuzhou Brighter Electromechanical Co., Ltd.waa soo saaraha caanka ah ee munaaradda iftiinka mobilada oo leh cilmi baaris iyo awood horumarineed iyo awoodo wax soo saar. Tan iyo markii la aasaasay, shirkaddu waxay u hoggaansaneyd falsafada ganacsiga ee daacadnimada, xirfad-yaqaannimada, hal-abuurka iyo heerka sare, waxayna ka go'an tahay inay abuurto alaab tayo sare leh oo iftiin leh. .Wakhtigan xaadirka ah, Taxanaha Laydhka Mobile-ka, Taxanaha Korontada Mobile-ka ee Gurmadka ah, Bamka Korontada Degdegga ah iyo Agabyada kale ee ay Shirkaddu soo saarto waxa si weyn u isticmaala Shirkadaha Korontada, Garoomada Diyaaradaha iyo Waaxaha Ciidanka, waxaana qayb ka mid ah Alaabta loo iibgeeyaa Australia iyo Bariga Dhexe. .
wax badan ka daawo>
Laydhka Daaraha iftiinka KLT-8000 LED
Qalabka nalka ee wax soo saarka sare leh, munaaradda Telescoping waxay wareegtaa ku dhawaad ​​360 darajo
Dhismooyinka Laydhka Haydarooliga La Laabi Karo ee Towers KLT-10000
Taawarkii ugu horreeyay ee iftiinka adduunka oo leh mastar laalaabida haydarooliga.KLT-10000 ayaa sanado badan wax ka beddeshay suuqa, isaga oo noqday nooca iibka ugu fiican ee munaaradda iftiinka mobilada ee Shiinaha.
Dhismooyinka Iftiinka La Qaadan Karo ee Isku-dhafka ah ee ay ku shaqeeyaan Tamarta Cadceedda iyo Dabaysha KLT-Hybrid
Tamarta iftiinka la qaadan karo si nadiif ah u shiilan
Haydarooliga Tooska ah ee kor loo qaaday Iftiinka Tower KLT-10000V
4X 1000 W nalalka halide birta ah oo leh mishiinka Kubota iyo koronto 8kW ah.Ikhtiyaar ilaa 20kW koronto leh oo leh awood badan oo dheeri ah oo lagu socodsiiyo qalabka.
Tower Light-Frequency High-6500
munaaradda halide iftiin bir is haysta oo aad u aamusan
Hydraulic Vertical Lifetd Tower Lighting KLT-10000V LED
Awoodda nalka ee 4X350W LED nalalka daadka waxay la kulmaan naqshad aad u cidhiidhi ah oo kor u qaadaysa munaaradda iftiinka cusub ee kor u qaadida munaaradda iftiinka ugu cufan iyo deegaanka-saaxiibtinimo ee weligeed la abuuray!
▶ Dhaqdhaqaaqa sare iyo firfircoonida Taxanaha LB6180E waxaa loogu talagalay shirkadaha korontadu inay isticmaalaan tiro badan oo baabuurta dib u hagaajinta ah, waxay si toos ah u noqon kartaa weelka halbeegga caadiga ah ee xamuulka sida baabuur ahaan, si degdeg ah baabuur-qaadista wuxuu u kaxeyn karaa goobta dayactirka ugu daran. .Marka la barbar dhigo nalalka dhaqameed ee u baahan gawaarida waaweyn ee rarka, waxay...
KLT-8000 munaaradda iftiinka taxanaha ah ee Brighter Electromechanical waxay ku siinaysaa dayactir kala duwan, dayactir hooseeya, iftiin waara oo lagu kalsoonaan karo. , Cimilada u adkaysata iyo saamaynta u adkaysata jidhka birta oo dhan. Waa dabool daboolan yahay...
Bir yar oo is haysta oo aad u aamusan oo iftiin leh BOY KLT-6500 400W Birta Halide Lamp x 4 3 Marxaladaha Mast <4.2m (13ft) Dhererka> Isafgaradka2. Si fudud loo maareyn karo - Hal qof ayaa si fudud u dhaqaajin kara cutubyada goobta.3. Meel wax lagu kaydiyo oo yaraato ayaa loo baahan yahay....
Taawarkii ugu horreeyay ee iftiinka adduunka oo leh mastar laalaabida haydarooliga.KLT-10000 ayaa sanado badan wax ka beddeshay suuqa, isaga oo noqday nooca iibka ugu fiican ee munaaradda iftiinka mobilada ee Shiinaha.Waad ku mahadsan tahay 4x1500W birta birta birta ah ee xoogga badan iyo nalalka 9.8 mitir, KLT-10000 waxay iftiimin kartaa goobo shaqo oo aad u weyn.Iibinta ugu fiican ee KLT-1000 waa bes-ka ...
KLT-1000OLED Tower Light Tower, oo ah munaaradda iftiinka wareega ee si gaar ah loogu sameeyay codsiyada macdanta.Thanks to 6X4000W LED nalalka, KLT-1000LED waxay bixisaa awood iftiin aad u sarreeya iyo dhammaan faa'iidooyinka nalka LED.Faa'iidooyinkaas waxaa ka mid ah adkeynta iyo dayactirka hooseeya sababtoo ah maqnaanshaha dhalooyinka iyo nalalka iftiinka.Shidaalka weyn ayaa...
4X 1000 W nalalka halide birta ah oo leh mishiinka Kubota iyo koronto 8kW ah.Ikhtiyaar ilaa 20kW koronto leh oo leh awood badan oo dheeri ah oo lagu socodsiiyo qalabka.Mastar-biyoodka wareegta, ee articulated mast wuxuu gaari karaa xagga hore, dhabarka iyo dhinaca si loo helo dabacsanaan dheeraad ah.Bar iftiinku sidoo kale wuxuu u janjeeraa 1800- iftiin kastaa wuxuu tilmaami karaa jiho gaar ah iyo sidoo kale isticmaalka si ...
Awaamiirta Way Soo Socdaan, Wax-soo-saarka Bishii Kale Ayaa Dhigaya Mid Kale
Ka dib markii la gaadhay in ka badan 200% korodhka isbeddelka ee 2020, shaqada iyo sii socoshada 2021 ayaa sidoo kale u dardar-galiyay si habsami leh sidii la filayay.Dhamaadka Noofambar, sanadkan waxa uu dhaafey hawlihii wax soo saarka ee sannadkii hore oo dhan.Markaan geleyno bisha ugu dambeysa ee 2021, dalabaadka alaabada ayaa soo socda midba midka kale, iyo saaxiibkii...
Ku guuleysiga Korontada Koonfurta, Kordhi Produ...
Bishii Oktoobar, sababtoo ah waaxda iibka ee xafiiska madaxa ee Xarunta Mashruuca Yunnan ayaa ku guulaysatay tartanka ganacsiga ee Koonfurta Power Grid, Fuzhou Bright waxay habaysay wax soo saarka si macquul ah si loo dhamaystiro bixinta alaabta sida loo qorsheeyay, waxayna samaysay diyaarin taxadar leh iyo maareynta sayniska hababka ka...
6-17 Beddelidda Gurmadka Degdegga ah ee Dhulgariirka
Sida laga soo xigtay Shabakadda Dhulgariirrada Shiinaha, dhulgariir cabirkiisu yahay 6.0 ayaa dhacay 22:55 wakhtiga Beijing bishii Juun 17, 2019 ee degmada Changning, Yibin City, ee Gobolka Sichuan (28.34 darajo waqooyi ee loolka, 104.9 darajo bari ee loolka), oo qoto dheer 16 kiiloomitir. .Dhulgariir cabirkiisu yahay 6.0 ayaa dhacay 22:55 bishii Juun 17, 2019 ee degmada Changning, Yib...
Amarada Joogtada ah ee...
Ku guuleysiga Koonfur...
6-17 Isbeddelka Ea
Qaybaha Tower Light...
Hal qayb oo ka mid ah Fuzhou Brighter Electromechanical Co., Ltd.
Ka hel iimaylka xilliyeed ee Brighter.
Marna ma wadaagi doono ama iibin mayno macluumaadkaaga xidhiidhka.